China API610 BB4 (RMD) mpanamboatra paompy sy mpamatsy | damei kingmech pump
Size: 4-10 santimetatra
Fahafahana: 100-580 m3 / h
1. Suction casing, debit casing, diffuser, ary impeller: vy karbonika amin'ny vy chrome.
2. Shaft, mitafy peratra ary kirihitra diffuser: vy vita amin'ny chromika amin'ny vy chrome.
1. Ny paompy dia casing sectional, paompy centrifugal marobe. Ny casing suction, casing an-tsehatra ary casing fandefasana dia mihazona mafy miaraka amin'ireo bolts. Ny tonon-taolana eo anelanelan'ny casing ireo dia voaisy tombo-kase amin'ny alàlan'ny fifandraisana vy sy vy. Mazava ho azy fa o-peratra dia ampiasaina ho tombo-kase fanampiana.
2. Ireo sombin-kazo sandoka dia ampiasaina amin'ny suction, sehatra ary famoahana casings karazana paompy fantsom-bozaka MSHB.
Famehezana ny vatan-kazo
1. Ny vongan'ireo paompy ireo dia voaisy tombo-kase amin'ny alàlan'ny rano malemy sy ny rano mangatsiaka. Ao amin'ny faritry ny famehezana ny tsorakazo, ny vatan'ny paompy dia voaro amin'ny tanany azo havaozina.
Bearings sy axial balancing fitaovana
2. Ny fivoriambe mihodina dia tohanan'ny fikorisa mihetsiketsika amin'ny tendrony roa amin'ny paompy. Noterena-lubricated ny bearings pump. Ny rafitra menaka dia ampiasaina amin'ny paompy DG karazana. Ny valin'ny axial an'ny rotor osis dia voalanjalanja amin'ny kapila mandanjalanja. Ary ny fanosehana fanosehana dia omena laso izay rsed hizaka ny herin'ny axial sisa tavela vokatry ny fiovan'ny toe-javatra iasana.
1. Ny paompy dia entin'ny motera mivantana amin'ny alàlan'ny fitambarana. Ny fitaovana, ny fonosana membrane ary ny fametahana hydraulic dia azo ampiasaina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny paompy dia azo entina amin'ny turbine an'ny motera.
2. Ny làlan'ny paompy mihodina dia mahitsy arakaraka ny fahitana azy eo am-pamaranana.
3. Karazana paompy fantsom-bozaka MSH avo lenta dia ampiasaina amin'ny famahanana boiler tosika avo lenta amin'ny paompy rano madio avo lenta.
Ampiasaina be amin'ny famatsiana rano amin'ny indostria
Previous: Paompy API610 BB3 (AMD)
Manaraka: Paompy API610 BB5 (DRM)
Modely API610 VS1 Pump VTD
Paompy API610 BB1 (SHD / DSH)
API610 OH1 Model FMD Pump